WIC waan ku soo dhaweynayaa!
WIC waa hooyada saaxiibkeed ugu fiican. Waa Barnaamij Nafaqeyn oo Dheeraad ah oo loogu talagalay haweenka, dhallaanka, iyo carruurta, iyo waxbadan! Helitaanka faa'iidooyinka WIC ayaa hadda si fudud ku soo kordhay: Kaarka cusub ee Louisiana eWIC iyo barnaamijka WICShopper ayaa ka dhigaya adeegsiga mid ka sahlan oo ka sii habboon. Hel naseexooyin wax laga iibsado, cuntada sida loo sameeyo iyo waxyaabo badan oo fududaynaya oo xiiso u leh quudinta qoyskaaga
Si aad wax badan uga ogaato WIC, fiirso fiidiyowyadaas!
Waa maxay 'eWIC'?
2019, Louisiana WIC waxay ka beddeshay waraaqo waraaqaha lagu beddelo kaarka cusub ee WIC elektiroonigga ah! Tani waxay ka dhigeysaa habka lacag bixinta mid aad u lamid ah noocyada kale ee lacagaha kaararka ku saleysan.
Fadlan daawashada fiidiyowyada hoos ku qoran oo weydii shaqaalaha WIC marka ay kaararka eWIC yimaadaan xafiiska WIC ee degaankaaga!
Waxaa jira xafiisyo 100 WIC oo ku yaal Louisiana. Si aad u hesho xafiiska WIC ee kuu dhow:
Isticmaal "Soo hel xafiiska WIC"Badhanka barnaamijka WICShopper si aad u hesho rugta caafimaadka ee ugu dhow
WICShopper - Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQs)
Oggol - Qalabkan waxaa loo oggol yahay WIC. Waa hab fiican in la ogaado haddii cunto WIC la oggol yahay. Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato waa inaad arki kartaa sheyga la ogol yahay, laakiin ma aha mid ku jira faa'iidooyinka cuntada ee WIC, markaa ma iibsan kartid WIC. Ilaa illaa WIC faa'iido u xirto barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" laguma dabaqi karo manfacyada qoyskaaga. Tusaale ahaan, ilmo hal sano jir ah wuxuu helayaa caano dhan. Haddii aadan haysan ilmo sannad jir ah oo qoyskaaga ka mid ah, caanaha oo dhan ma noqon doonaan qayb ka mid ah faa'iidooyinka cuntada ee WIC, adiguna ma awoodi doontid inaad caano ka iibsatid boosteejada.
Louisiana WIC Qodobka Cunnada la Oggolaaday